Translator Newsletter: Fampianarana fiteny roa, Webinars maimaim-poana, sy tantara hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2019 7:44 GMT
Vao haingana ny NPR no nanadihady ny fomba itondran'i Etazonia ny fampianarana tamin'ireo mpianatra teo amin'ny 5 tapitrisa eo ho eo izay tsy fitenin-drazan'izy ireo ny teny anglisy. Tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Tombontsoa 6 mety ho azon'ny atidoha amin'ny fampianarana fiteny roa”, miresaka momba ny fiantraikan'ny fandaharam-pianarana fiteny roa sy amin'ny fomba roa eny amin'ny sekolim-panjakana amin'ny zavatra toy ny famindram-po, famakiana teny, fifantohana, ny fahombiazan'ny sekoly sy ny firotsahana ary ny fahasamihafana sy ny fampiatiana i Anya Kamenetz. Jereo ary lazao anay izay eritreritrareo – manana fandaharam-pianarana toy izany ve ianao any amin'ny sekolinanreo eo an-toerana?
Manomboka amin'ny 8 Desambra (amin'ity Alakamisy ity!), hanome andiana webinars maimaim-poana (!) ny ProZ. Maro no hiresaka momba ny fomba hihaonana amin'ny mpanjifa ao amin'ny sehatry ny ProZ ary ny hafa miresaka momba ny fampiasana fitaovana CAT [milina fandikan-teny] isan-karazany. Jereo ato ny lisitra raha hijery hoe misy mahasoa anao amin'ny maha-mpandika teny mahaleotena anao ve!
Rentsika foana ireo teny roa ireo rehefa miasa amin'ny tetikasa fandikan-teny. Ny ankamaroan'ny olona dia mahafantatra fa samihafa kely izy ireo, fa ny mpanjifa kosa matetika mampifangaro azy ireo. Indraja Athluri nametraka ity fanazavana an-tsary mahafinaritra ity mba hampiseho ny fahasamihafana misy eo amin'ny fandikan-teny sy ny famangitana izay azonao zaraina amin'ny mpanjifa sy ny namana mpandika teny hafa!
Raha sambany mamaky ity taratasim-baovao ianao ary te-hiaraka amin'ny Global Voices dia lazao anay bebe kokoa ato ny momba anao!